What did I do in Mandalay? | The World of Pinkgold
What did I do in Mandalay?
Posted on December 29, 2007 by cuttiepinkgold
ရွှေမန်းတောင် ဂေါက်ကွင်းကို အလုပ်ကိစ္စသွားရင်းနဲ့က မန္တလေးတောင်ကို လွမ်းလွမ်းနဲ့ ရိုက်ယူခဲ့တယ်။ တောင်ပေါ်တင်ချင်လိုက်တာလေ တစ်ပိုင်းကို သေရာ။ ဒါပေမယ့် မတက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. အလုပ်က ရှိသေးတာကို။
အောက်ကပုံကတော့ 35 လမ်းနဲ့ 78 လမ်းထောင့်က ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ မီးပွိုင့်တစ်ခုကို ရိုက်လာတာပါ။
မန်းလေးမှာ ကျုံးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လိုက်တာလေ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ဒါပေမယ့် အခွင့်မသာခဲ့ဘူး။ ညဘက်တော့ ရောက်တယ် မှောင်မည်းနေတာ ဘာမှကို မမြင်ရလို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ် 😦
ဆေးလ်ဗားမွန်းနဲ့ အမှတ်တရလေးပါ။ သူအွန်လိုင်းမှာ တစ်ပတ်ပျောက်နေတုန်း အနိုင်ကျင့်ပြီး တင်လိုက်တာ..ဟိ
Filed under Trip and Photos |	3 Comments
MELODYMAUNG on December 29, 2007 at 7:13 am said:
၀တုတ်လေးရော ပိန်တာရိုးလေးပါ ချစ်ချာလေးနော် 😛
brokenworld on December 30, 2007 at 6:59 pm said:
ဟိတ်ကောင် လဒ.. နင်တို့က ဂျပန်ဆိုင်သွားပီး ဂျပန်စာ မစားပဲနဲ့ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘိုစာစားကြသ တုန်း..။ 😀 အမှန်တော့ နာမစားရလို့..။ 😛 လဒရယ်မန္တလေးတောင်ကိုမြင်တော့ နာမန္တလေးကို လွမ်းလိုက်တာဟာ..။ အခုလိုဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေး တာကျေးဇူးနော် ချစ်ဆုံး မန္တလေးအလွမ်းပြေ ကြည့်ရတာပါ့..။ 🙂
Pinkgold on December 31, 2007 at 2:58 am said:
အေးပါ ဂျူးရယ် ငါလည်း ဆရာမ မှာကျွေးတာ စားရတာလေ စားလို့တော့ ကောင်းသား နင့်ကိုလည်းလွမ်းတယ်ဟ